Pain >>aching>>> ?? ~ စန္ဒကူး
အားပါး ...... ဘယ်နှယ့်.... ဂရုစိုက်လေဗျာ... မပေါ့သင့်ဘူး... သွေးပေါင်ချတဲ့ နည်းတွေ အများကြီးပါဗျာ.... သေချာလုပ်ပါဦး..
Take care of yourself and do share the exercises, as my other half suffers the same. Thanks in advance!
လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ သိချင်ပါတယ်... ဒန့်ဒလွန်သီးမုန့် ခဏခဏ စားလေ..ကူး
ဒါပေမဲ့ ထခါမှတော့ အဲ့လောက်မရောက်ဖူးဘူး
၁၅၀/၉၀ လောက်ဆို မခံနိုင်တော့ဘူး။
ဂရုစိုက်ပါ။ လေခိုတာလား ? လေလျှိုတာလား
မပြောတတ်ဘူး။ အဲ့ဒါဖြစ်ရင်လည်း အဲ့လိုဖြစ်တတ်
တယ်နော်။ တခါတခါ ဆရာဝန်ကုလို့ မရတဲ့ရောဂါတွေ
ဘာမှ မတတ်တဲ့ ဘေးလူတွေကြောင့် ပျောက်သွားတတ်
တယ်။ အတွေ့ အကြုံပေါ့။ ကိုယ်ကြုံတွေ့ နေရတာ
မမကူးရေ...ဂရုစိုက်ပါနော်။ မပေါ့ပါနဲ့။ အယ်...အဲ့လောက်ြ့ကီးတောင် သွေးတိုးတယ်လား။ များလိုက်တာ အစ်မရယ်...။ ရို့စ်လည်း အုန်းနို့ စားပြီးရင် ခေါင်းထဲမှာ ရိပ်ရိပ်နဲ့ မူးတတ်တယ်။ ကိုယ်က ငယ်သေးလို့ သွေးတိုးတာ မပာုတ်ဘူးလို့ ထင်နေတာ။ ရို့စ်က ခါးနာတာ အစ်မရေ... အိမ်က အိပ်ရာကြောင့် ထင်တာပဲ။ အရမ်း ပျော့အိစက်နေတဲ့ မွေ့ရာကြောင့် ခါးနာတာ။
မမ သေချာဂရုစိုက်ပါနော်။ မမ အမြဲ နေကောင်း ကျန်းမာပြီး ရွှင်လန်း ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဂရုစိုက်ပါနော်။ မပေါ့နေပါနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ အချိန်ယူပြီးပြပါ။
ဒန့်သလွန်ဆို အပင်တောင်စိုက်ထားတာ.. အမြဲပြုပ်သောက်ဖြစ်တယ်။
မပေါ့ပါနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ အချိန်ယူပြီးပြပါ။
မပေါ.နဲ.နော်။ သွေးတိုးတာကို၂၂၀လောက်ထိတိုးတာကိုဘာမှမခံစားရဘူးဆိုတာလဲကြောက်ဖို.ကောင်းတယ်နော်။တချို.ဆိုပုံမှန် ၁၂၀၊၈၀ ထက်ကို နည်းနည်းပိုနေပြီဆိုရင်ကိုဘဲ ခေါင်းမထူနိုင်အောင်မူးတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာမျိုး sign ပြတတ်တယ်လေ။အခုမကူးကူးက ၂၀၀ကျော်ထိအေးဆေးဘဲဆိုတော. ဒိုင်းခနဲဆောင်.တိုးမှာကြောက်ရတယ်။သတိထားပါနော်။
လေ့ကျင့်ခန်းလေးသိချင်တယ်ကူးရေ... ဒို့လည်း အကြောတက်ဇက်ညောင်းအမြဲဖြစ်တတ်လို့
တို့လည်း ဒူးရောင်ဘူးတယ်၊ ဆေးရုံကို wheel chair နဲ့ပြေးလိုက်ရတယ်၊ အပ်နဲ့အရည်စုပ်ထုတ်တယ်တဲ့၊ လမ်း နည်းနည်းတောင် လေးလျှောက်မရသလိုဖြစ်တာ၊ ဘာမှတော့ ရောဂါအထူးအဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့ ဒီလိုဖြစ်တာ ဒီအရွယ်နဲ့စောတယ်တဲ့၊
အမြန်ဆုံး ပိန်းကြာရွက်တွင် ရေမတင်သလို ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ
Please post the picture of exercise. I also have to sit in front of computers for hours at work and also at home to study. And I know exactly the kind of pain you are talking about.
ညီမလေးေ၇ အမဖြစ်တာနဲ့ အတူတူဘဲမို့ လို့ -
အမ က ဂုတ်ကျီးပေါင်းတက်တာ၊သွေတိုးတော့မ၇ှိဘူး။
တော်တော်ဆိုးတယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာ ၄ လ၇ှိသွားပြီ၊ မသက်သာသေးဘူး။ MRI Scan ၇ိုက်၇ဦးမယ်။ အခြေအနေသိပ်ဆိုးနေ၇င် Reconstruction လုပ်၇မယ်ပြောတယ်။
ku ku yay
I want to suggest to you.you should eat2lime leaves.
Take care well and I pray for u good health soon.
yinn mar said...
I want to suggest to you.you should eat2leaves of lime per day.